အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: February 2008
ဆရာ့ ကျုရှင် တက်
အေ ဘီ စီ ဒီ.အလွတ်ကျက်..
အရုပ်နဲ့ ကစားနေတဲ့ ကြက်ရိုးမရွှေဇင်
သားရေကွင်း ပစ်နေတဲ့ မောင်မင်းဇင်
အဿပြာဆရာ မဟုတ်တဲ့ စေတနာဆရာ
မှိုင်းရာပြည့် ဦးသန့် အရေးအခင်း။
၈၈၈၈ ..တော်လှန်ရေးနှစ်တွေ ထဲ..
အဖေပါပေါင်း ၄ယောက်စလုံးက ထောင်ထဲ.
ထောင်ထွက်ပြီး သား ၂ ယောက်က အဝေးပြေး
သေသည်အထိ သားတွေနဲ့ ဝေး
ငြိမ်းချမ်းရေးဖခင် ဆရာ နဲ့ မမ။
တပည့်မ မသဒ္ဓါ ဦးချပါတယ်။
ကျောက်ကောင်းမှန် တဲ့ သားများ
ဆရာ့သွေးများယနေ့ ထိ နီနီ။
ဆရာ ပေးခဲ့တဲ့ သတ္တိ.ဗျတ္တိ.
ဆရာ့လို ရှိတဲ့ ဇွဲနဘဲ..
ဘယ်တော့မှ အလံ မလှဲ..
မသဒ္ဓါ ( ၂။၂၈။၂၀၀၈) သားဖေဖေရော..မေမေ ပါသိလျှင်..သားတွေအတွက် ဂုဏ်ယူမှာပါ ။ မမတို့ ဂုဏ်ယူနေ ပါသည်..သားငယ်..မြန်မြန် လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:36 PM0comments
လူရဲ့ မွေးရာပါ အင်္ဂါ တွေ ဆုံး
ဒါ ဘာကြီးလဲဟဲ့ဆိုတဲ့ ဓါတ်ပုံ
ဒို့ တာဝန် အရေးသုံးပါး
ဦးဝင်းတင် ထောင်ထဲကျတာ..၂၀ နှစ်
ကျည်သင့်တဲ့ ဂျပန်သတင်းထောက် ခန်းဂျီးဆန်
ဓါတ်ပုံအနုပညာ ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်
မြန်မာနေရှင်းက အယ်ဒီတာ ဦးသက်ဇင်
ဦးစိန်ဝင်းမောင် နဲ့အခြားမီဒီယာသမားများ..
မြတ်ခိုင် ကလွဲရင်..အားလုံးသာ ထောင်ထဲသွား..
ပီညဲရိုး ရဲ့ ဗမာပြည် အစီရင်ခံစာ
ဒီအကြောင်းတွေ ဘဲ ..ထပ်တလဲလဲ
အင်တာနက် နှေးချက် လှုပ်တုတ်တုတ်သာ
ဘင်လာဒင် ရဲ့ ကျောက်လှိုင်ဂူထက်
မိမိဖာသာ.. ထူ မှ..ထမယ်.။
အနာဂတ်တို့ တွေရဲ့ လူ..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:21 PM0comments
တို့ မီး ရှို့ မီး
ရေ မီး မင်းဘေး ခိုးသူ..
မီးဘေး က မလုံခြုံ
မင်းဘေးက (၂၄) နာရီ အချိန်ကုန်
တောကြောင် က လက်ခမောင်းခတ်။
သူ့ အမျိုးတွေ အတွက်..နေရာချမယ်
မီးကို ပြ လုယက်..
လို ချင်လို့ တို့ တဲ့ လူက တို့ ..
လို ချင်လို့ ရှို့ တဲ့ လူက ရှို့ 
ပြာကျ ပြည်သူ၊ စီးပွါးပျက် ဖို့ 
ရန်သူမျိုး ရဲ့ ငါးပါး..
စုပေါင်း တစ်ပါးထဲ ဖြစ်သွား..
မင်းကဘဲ.. ပြည်သု့ ရန်သူ
မ ဆူပူနိုင်အောင် မီးတင်ရှို့ 
မသဒ္ဓါ ( ၂။၂၇။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:31 AM0comments
သူယုတ်မာနဲ့ သူတော်ကောင်း (ပုလိပ်ဆိုးနဲ့ ရိုးသား လှေထိုးသား)
၀မ်းစာရေး ဘဲ လုပ်လုပ်.
နှစ်သက် လို့ ဘဲလုပ်လုပ်.
ကြီးမြတ် လူသားဂုဏ်အင်္ဂါ။
ဆရာဝန် ဆိုတာ အသက်ကယ်
ရှေ့ နေဆိုတာ တရားခံကို..ဥပဒေ အရကာကွယ်ပေး
ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ က စာသင်.
စစ်သား ဆိုတာ.. နယ်ချဲ့ ရန်သူကိုတိုက်
အလုပ်သမား က နိုင်ငံဝန်ထမ်း
ပြည်သူ့ အစိုးရ..တရားမျှတ အုပ်ချုပ်စတမ်း
ပြည်သူ အခွန် ဘဏ္ဍာစား
သူတပါး လုပ်ခ ချွေးနည်းစာ စား.
တန်ရာ တန်ကြေး ပြန်မပေး..
ဒို့ ဗမာတွေ အချင်းချင်း။
ကူးတို့ ပို့ မိတာ..ဘာ အပြစ်..
တန်ရာ တန်ဖိုး လှေခ ယူ.။
ဒါ သူ့ အလုပ်..ကိုယ့် လူ..
မင်း လူ မဟုတ်ဘူးလား။
မင်း ဗိုက်ဝဖို့ ဘဲ မင်းကြည့်
သခင်အားရ ကျွန်ပါးဝ ဖို့ ဘဲသိ
လှေထိုးသည့် သူဆင်းရဲ သုံးဦးဘ၀
NLD ကို.တဖက်ကမ်းပို့ မိတဲ့ ပုဒ်မ
အစာ ငတ်ပြတ် သေကြေရေး..
တနေ့ လုပ်မှ တနေ့ စား သမား
လှေထိုး မသွားရဘူး ဆိုတဲ့ မင်းမိန့် 
လောဘ ဒေါသ နှင့် ဣဿာ မစ္ဆရိယ
ဆိုးရွားတဲ့ စေတသိတ် သုံးမျိုး၏
စေတနာနဲ့ ညီတူသော အကျိုးပေး
သမ္မာအာဇီဝ အရ..လှေထိုးစားရရှာသော.. NLD အဖွဲ့ဝင်အား တဖက်ကမ်း ကူးတို့ ပိ်ု့ပေးသောကြောင့် အကျဉ်းကျ.အစာ ငတ်မွတ်ရ ရှာသော.ရွာတန်းရှည်. ရေနံချောင်းလှေဆိပ် မှ.လှေသမားသုံးဦးအား ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:14 AM2comments
ဘယ်တော့မှ မေ့မရ..သံဃာတော်တို့ သွေး မြေခ..( အပိုင်း ၁)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:21 PM0comments
ဘယ်တော့မှ မေ့မရ..သံဃာတော်တို့ သွေး မြေခ..( အပိုင်း ၂)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:18 PM0comments
ဖွတ်ထွက်တဲ့ တောင်ပို့ 
ခြေဆေးချင် တဲ့ ရေ
မြှုံးထဲက ရုန်းတိုးထွက်တဲ့ ငါး.
အဖြူနဲ့အမည်း..ဘယ်ဟာလည်း..
တုတ် ဆိုရင် တုတ်..
ရန်ဆိုရင် ပြတ်..မာန် ကိုသတ်
နှောင်ကြိုးစတို့ငါ့ မရှိ်တော့။
တောင်ပံ တို့ဖြန့် ခါ..
မသဒ္ဓါကတော့ မည်းပြီဆို..တူးတူးခါးခါးပါ.. အားလုံးလည်း အဖြူ အမည်း သဲကွဲကြပါစေ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:04 AM0comments
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:23 PM0comments
Labels: Politics Poster
နအဖ ဆိုတဲ့ ရွှေဗမာ..လူကြီးဂေါင်းများ
သူရဲ့ နူနာ ဆေးကုပေးဖို့ လာတဲ့သူ
စေတနာ့ရှင်..ရင်ဝ အနူ ခြေနဲ့ ကန်ချ
သူရဲ့ သားသမီး ထမင်းဝအောင် သူမကြွေးနိုင်
ဒို့ ရဲ့ ရာဇပုလ္လင်ပေါ်နား
ကျင်ငယ်စွန့် နေတာ ကြည့်ရက်ကြသလား။
အနောက်တဲ့တဲ့ လည်း။ ပုဆိုးက ဖင်ပေါက်
မျက်နှာကို သနပ်ခါးဖို့ ။ ပေါင်မှာကသေးကြောင်းစို့ 
စေတနာ အလျှောက် လာရောက်ကယ်ဆယ်.
( သို့ မဟုတ်) NGO များ
ချေး မများနဲ့ ကိုယ့်လူ
ဖျာ ကလနားအစုတ်. သလွန်တော်လုပ်။
ခြစားနေတဲ့ ရာဇပုလ္လင်ပေါ် မျက်နှာထားမှုံကုပ်
စစ်အစိုးရရဲ့ အခြေခံစည်းမျဉ်း လေးရပ်ကို လေးစား
အမြတ်အစွန်း အတွက် မလုပ်ရ၊
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မသက်ဆိုင်သောအဖွဲ့များ ဖြစ်ရမည်”တဲ့
နောက်ကွယ်ကျ လက်ဖြန့် ကုတ်
ဆန်မရှ်ိ..XXX စားကလည်း ကြီးသေးတယ်။
မသဒ္ဓါ (၂။၁၅။၂၀၀၈) http://www.irrawaddy.org/bur/news2008/February/feb_14d_08.html တွင် အကြောင်းစုံဖတ်ပါ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:46 AM0comments
ပင့်ကူ လိုသာ ကျင့်
သစ်ကို ဖြတ်စေမဲ့ ပေါက်ဆိန်တစ်ရိုး
ရာဇ၀င်တွေ မရိုင်းစေနဲ့ ဟေ့။
ထမင်းပွဲမရှိ ပျက်နေတဲ့ မိသားစု
ဆေးဖိုးမရှိ. ငန်းဆေးနဲ့ 
၉၆ ပါးရောဂါ ပျောက်စေရမှု
သွေးခွဲ ပြည်သူနဲ့ စစ်သား.
ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့ Road Map.
နအဖကမှ တကဲ့ အမျိုးဖျက်။
ဂူအမိုးပေါ်ကကျ။ ဒီ ပင့်ကူငယ်နက်။။
ဒို့လက်မမြောက်စေတနေ့ မှာ..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:05 AM0comments
ပြည်ကိုဖျက်မည့် ။ အယုတ်မိစ္ဆာ
ရဲလျှင် တစ်သက်။ ကြောက်သော် ဆယ်ခါ
ဇာနည်လင်သား။ သမီးသားတို့ 
ခန္ဓာကြေကြေ ။ သက်ပင် သေသေ
ခင်ပွန်းသားတို့မျိုးချစ်ဂုဏ်။
ဘိုးဘွားအမွေ၊ တို့ ကာကွယ်စေ။
သင်၏ တသက်။ လှဲလှယ် ကယ်ယူ
ချမ်းသာ ပြည့်စုံ။ စားဝတ် လုံစေ။
နှိပ်စက် ကင်းစင်။ ပြုံးနိုင်ကြလျှင်
ငါတို့ ၏သွေး..ခန္ဓာတို့ စတေး
ဒါ..ဒို့ အရေး။ လက်မနှေးကြစေလို။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:19 AM0comments
ဆက်လက် အသံလွင်နေပါစေ့မည်။ ဖထီးချစ်တဲ့ ရွှေဖားစည်။
အာဇာနည် မို့ ..
ရိုးသားသူ မို့ 
အမျိုးချစ်သူ မို့ 
နိူင်ငံချစ်သူ မို့ 
ရိုးမ၏ ပန်းတပွင့်ကြွေကျ မြေဆီ။
သူရဲကောင်းတို့ ၏ ၀ိညာဉ်သည်။
ဖိုးမူတို့ နှင့် တသားထည်းကျန်ရစ်ပါသည်။
စပါး ရွှေဝါသီးတဲ့ဖထီးချစ်တဲ့ ဧရာဝတီမြေ
က ဒုံးယိန်း နဲ့ .ဇွဲကပင် တောင်ခြေက
ဆက်လက် လန်းဆန်းစေဖို့ 
ကရင်တို့ ရဲ့ အမျိုးသား နိမိတ်ပုံ။
သမိ်ုင်း တွင်ရစ် ကျန်စေ။
မသဒ္ဓါ ( ၂။၁၄။၂၀၀၈)
ဖထီး ပဒို အတွက်..မိသားစုနှင့် အတူ ရင်နှင့်အမျှ ၀မ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:30 AM 1 comments
သူငယ်တန်း ကျောင်းသားက စ
အိုင်တီ ကဗျာဆရာ ဘ၀..
လက်ညှိုး တစ်ချောင်းနဲ့ စ
အစမှာ အရာတိုင်း ခက်ခဲတတ်တာပင်။
တနေ့ လုံးရိုက်. မှားလိုက် ဖျက်လိုက်
မျက်လုံး ဝေသီ..ခေါင်းတွေ အုံကိုက်။
စာသားေ၀၀ါး။ ကာရံက မလိုက်။
မပြီးမချင်း မထ။ ကဗျာ ပိုးထနေခိုက်
အိမ် မရှင်းနိုင်။ ပိုးထိုး လောက်ကိုက်။
အမေရှိရင်..ရိုက်ခံတောင် ထိလိုက်မဲ့ မသဒ္ဓါ
ကျမကလည်း ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ..
ခံပေးမဲ့ မသဒ္ဓါ ရဲ့..ပုခုံး တစ်ဖက်
ကမ်းလက်နဲ့ကြိုပါတယ်။
တွေ့ ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
ကျမတို့ဗမာပြည်မှာမွေး
ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ ဇိမ်ခံပစ္စည်း
ကျမ တို့ အတူတူ..
အာဏာရှင်သို့ တိုက်ကြမဲ့ မီဒီယာလူ.။
ပန်းတိုင်သို့ မရောက်မချင်း။ ရဲဘက်ညီညာအတူ။
မျိုးချစ် ဘလော့ဂါများ တိုးပွါးရေး
အကူအညီလိုပါက အော်ခေါ် လက်တို့ ပါရန်။
အကိုကြီးကိုအောင်ဝေးသို့ .တပ်ကူခေါ်ပါသည်။ သွေးမကြဲပါက..နွဲကြမဲ့ မီဒီယာတိုက်ပွဲ..တိုက်မယ်ဆို..ဇက်လက်ရဲရဲ..အိမ်ဦးခန်းထဲသို့ သာကြွပါရှင်။ http://www.irrawaddy.org/bur/ratha2008/February/ratha01.html ဖတ်မိပါသောကြောင့်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:10 AM0comments
လူသတ် တရားခံက ဘယ်သူလည်း.။
အသက် (၃၃) အရွယ်ကောင်းစဉ်
ဗြိတိသျ အချို့ ရဲ့.အထောက်အပံ့ခံ။
မင်းသားလို ကိုယ်မှ မကရ..ဖောက်ချင်တဲ့ပတ်မ
လူယုတ်မာတို့ ၏ ညာဉ်။
အမြတ်ထွက်အောင် လုပ်သူနယ်ချဲ့ 
သူ့ ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့စာ.
ကျောင်းထဲ ခလေးတွေရွတ်ဆိုကြ သူ့ ကဗျာ
သူနံမည်နဲ့လမ်း။ သူ့ နံမည်နဲ့ မြို့ 
သူနံမည်နဲ့ဈေး။ သူ့ နံမည်နဲ့ ပန်းခြံ
အမြို့ မြို့ အနယ်နယ်..ရှိကြတယ်
သူ့ ရဲ့ ကျောက်ရုပ်. ကြေးရုပ်
သူ့ ရာဇ၀င်တွေ..မှိန်ဖျော့ အရောင်ပျက်စေ။
သူတို့ဘယ်သို့ ဖျက်ဖျက်။
၈၈၈၈ လူငယ်များရဲ့ နှလုံးသား
ဦးစောက ဗိုလ်ချုပ် အသက် သတ်ရုံသာသတ်
တကဲ့ အောင်ဆန်း..စိတ်ဓါတ်က မသေ..
ယနေ့ တိုင်..အောင်ဆန်းစိတ်ဓါတ် ကို
မသဒ္ဓါ (၂။၁၃။၂၀၀၇) အလေးပြုပါသည် ချစ်သောအဖေ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:22 AM0comments
မင်းတို့ မှာ အရည်အချင်း ပြည့်မီစွာ။
ဆင်းလှဲ့ ပါတော့ သက်ကြားအိုများ
လူအိုရုံ ထဲရောက်ဖို့ တကဲ့ အချိန်တွေတန်။၊
တည်ပြီးတဲ့ ဘုရား၊ ပြီးမှ ဌက်လင်းဠအနားမခံနိုင်။
ဒို့ အနာဂတ်..ဒို့ တတွေပြောင်းမယ်။
ဖွဲ့ စည်းပုံဥပဒေဆိုတာနိုင်ငံရဲ့ အသက်
ဒါးမိုးပြီး ငါ ဥပဒေ ငါရေး..
မင်း.ရဲ့ နောက်မျိုး ခုနှစ်ဆက်..
စွန့် လွတ်ခြင်းများနဲ့ 
ဘက်နက်နဲ့ ပါးပါးလှီးခံရတဲ့ ဗမာပြည်။
သမီးတို့ ၏ မျိုးဆက်..
ယောက်ျားက ဒါးသွေး။ မိန်းမက သားမွေး
ပြုစု ပျိုးထောင်။ မိဘကောင်း လက်ထွက်
နောက်လာမဲ့ လူ့ ဘောင်သစ်.
မသဒ္ဓါ ( ၂။၁၂။၂၀၀၈)..ဗိုလ်ချုပ်ဖခင်သို့ ...
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:03 AM0comments
ဒို့ များသာ ညီညာရင်ဆိုင်..
ဒို့ များရဲ့ အောင်ပန်းတိုင်။
မသဒ္ဓါ ( ၂။၁၂။၂၀၀၈)..ပင်လုံ၏မျိုးဆက်ဟောင်း မှသည် မျိုးဆက်သစ်များဆီသို့ 
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:43 AM0comments
ဦးဂမ္ဘီရ၊ တောက်ပတဲ့ မိုးသောက်ကြယ်။
လူ့ ဘောင်လောက၊ ၀ဋ္ဋ်ဆင်းရဲမှ
နိဗ္ဗါန် ရည်စူး၊ ပန်ဆုထူးယူ
ကျွန်ုပ် နံမည် ဦးဂမ္ဘီ။
ရောင့်ရဲ ပါရမီ ဦးဂမ္ဘီ။
ပြည်သူ့ ရဲ့ဆွမ်း၊ ကမ်းလက်ခံဖြန့် 
မဂ္ဂလမ်းတွင်။ အူမ မတောင့်
မေတ္တာပို့ သ။ ဆန္ဒပြသည်။
အများ အတွက် ။ ငါ၏အသက်
မမှုပေတည့် ၊ မြတ်သောပြည်ကျိုး
ငါသယ်ပိုးမည်။ ငါ၏အမည် ဦး ဦးဂမ္ဘီ။
သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု၊ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဦးဂမ္ဘီရ
ပုဒ်မ ၅(ည) တိုင်းပြည်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးအရ
ကျွန်ုပ် နံမည် ရှင်ဂမ္ဘီ။
မှောင်နေသေးတဲ့ တဒင်္ဂ၊ ခဏလေးအချိန်သာမယ။
ငါ့ အရောင်နဲ့ ထိန်ဝင်း.
အာရုဏ်၏ ရှေ့ ပြေး..
ငါသည် မိုးသောက်ကြယ် ဦးဂမ္ဘီ။
မသဒ္ဓါ ( ၂။၁၂။၂၀၀၈) သံဃာ့ အာဇာနည့် ဦးသျှောင်..ဘုန်းဘုန်းဦးဂမ္ဘီရ သို့ လေးစား ဦးတင် အပ်ပါသည်ဘုရား။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:09 AM0comments
သုမန ကျောမှာ ဒဏ်ရာတွေချည့်
နောက်တစ်တုံး ဒို့ ထပ် အမိမခံဘူး.
တကဲ့ကလေးကစားတဲ့ ချိုလိမ်။.
ဒါ ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့ ပွဲ
လူကြီးမင်းတို မတန် မရာ ထိုင်ခုံ
ဖင်ခွါ ဆင်းဖို့ သာလို။
၁၀၀% အပြည့်ရအောင်..ခိုးမဲ့ မဲခိုးပွဲ
ဒို့ ပြည်သူမကြိုက်ဘူး ..
ကဲ မင်း ဘာတတ်နိုင်သလည်း.
ဘယ်သူအမဲထဲ့ထဲ့ ..အဖြူပုံးထဲဘဲခိုးပြမဲ့ နအဖ.
မဲသွားမထည်ကြနဲ့ပြည်သူ..
ဖွတ်မွဲ။ လင်းဠ။ ကြံ့ဖွတ်နဲ့ပုတ်သင်
ခွေးအ နဲ့သာ အလွမ်းတည့်ချင်.
ရေစုန်မှာ ပက်လက်မျောနေတဲ့ ဒို့ နိုင်ငံ
ဗမာ၏ ရင်သွေး။ ဗမာ၏သွေး
မင်းတို့ ကိုယ်ထဲ တစ်စက်ဘဲရှိပစေ။
ဒို့ တတွေ.. အားလုံးဗမာဘဲ။
လာလေ တူတူ တိုက်ကြစို့ 
အကြမ်း မဖက်တဲ့ တော်လှန်ရေး.
ပစ်ချင်လည်း ပစ်..ဒို့ သွေးနဲ့ရေး
ရှေ့ သို ဆက်လက် ချီ။
မသဒ္ဓါ ( ၂။၁၀။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:54 AM2comments
ဟင်းချက်ဖို့ ရေနွေးအိုး တည်စောင့်နေတဲ့ နအဖ
သူ အမြီး လုပ်တော့မည်။
ရူပကာ ကလည်း မလာလျှင်။
၈၈ မျိုးဆက် (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)
၀ံသာနု (NLD)..နဲ့လေ့လာရေးကျောင်းတော်သားအစု
အတု နဲ့ အစစ်ဆိုတာ.တုမနှိုင်းသာ
ဆီ နဲ့ ရေ။ အဖြူနဲ့အမဲ..
ဆန်လုံးနဲ့ ဖွဲ။ သဲသဲ ကွဲကွဲ။
မင်းအဘတွေ ပုလ္လင်တော်လှုပ်နေ လို့ 
စိတ်တွေ နောက်။ ဘုရားပေါ်ပတ် ၀က်ဆွဲလမ်းလျှောက်
အမြီးမခတ် နဲ့ငြိမ်ငြိမ်သာနေ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:22 AM0comments
မသဒ္ဓါ တို့ ဆယ်ကျော်သက်
ကောင်ကလေးတွေ အိမ်ရှေ့ ရှောက်ပြန်သံပေး
အဖေ ရပ်ကွက် အစည်းဝေးသွားတဲ့ အချိန်
အိမ်ဘေး. ဘန်ဒါပင် လေးနားမှာ။
အို…အရိပ်ကလေး သီချင်းလေးနဲ့ ပိုးတတ်သူ
အဖေ က ဘဒင်သီချင်းထဲကလို
အသံနက်ကြီး နဲ့ အော်.
" ဟေ့ ငါ့သမီး စာကျက်နေတယ်နော်။"
သုံးယောက်သော အပျို ညီအမ..
လူ့ ဘ၀ရဲ့ ခရီးလမ်း..
တတိယ အရွယ်..ကုသိုလ် ရှာမယ်..
ကောင်းကျိုး ထမ်းရွက်ရမဲ့ အရွယ်။
ဘ၀ ကို အထောက်အကူပြုတယ်။
အဆင့်ကျော်သွားတဲ့ သူ့ ဘ၀.
ရင့်ကျက်မှုမရ။ စဉ်းစားစရာ ပညာမစုံ
တတ်သည့်ပညာ။ ခိုးတတ်ရုံ၊ လူသတ်ရုံ။
ဒို့ တွေလည်း ငယ်ရာကကြီးလာ..
ခလေးတွေအပေါ် ထားပါ မုဒိတာ။
ရွှေနဲ့ တောင် မလဲနိုင်အား.
ထောင်ထဲဘဲ ဆွဲထည့်။ ပေါ်တာလည်း ဆွဲရဲ့
တက္ကသိုလ် တက်.တခြားအခန်းရှေ့ မသွားရ
ကော်ရစ်ဒါကနေ မှ ကောင်မလေးတွေ မငန်းရ။
ဘာသာမတူအတန်း။ သော့ခတ် ကဒ်ပြားစစ်။
အရွယ်နဲ့ သူ့ အချိန်
နေခြည်မှာမှ မပွင့်ခဲ့ ရရင်.
မသဒ္ဓါ (၂။ ၈ ။၂၀၀၈ ) လူကြီးမင်းမဆန်သော လူကြီးမင်းဟန်ဆောင်နေကြသော လူကြီးမင်းများသို့ 
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:46 AM0comments
သင်းမကွဲ မဲ့ နွားအုပ်.
ပိုက်ကိုချီ ပျံတက်မဲ့ ရွှေဟသာင်္များ
တစ်စက်ချင်း တစ်စက်.. ကြွေသက်
စည်းလုံးခြင်းနဲ့ ၊ အားသစ်မွေးပြီ..
ညီညွတ်ကြမဲ့.. ဒို့ သွေးသားများသည်။
မသဒ္ဓါ ( ၂။၈။၂၀၀၈)
(၆၁) နှစ်မြောက် စစ်မှန်သော ဒို့ ပြည်ထောင်စုနေ့ ရဲ့မွေးနေ့ မင်္ဂလာသို့ 
မအားလပ်သည့်ကြား မှ ဒီဇိုင်းဆွဲ၍ ပေးပို့ သော မောင်လေးမျိုး အားကျေးဇူးပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:42 PM0comments
ကိုယ့်ပြည်တွင်းအား ကို ကိုယ်အားကိုး.
လက်နက်ဆိုး နဲ့ စစ်ရန်သူ
လက်ပလာနဲ့နိုင်ဖို့ မလွယ်ကူ..
ငါးကြင်းဆီ နဲ့ သာ..ငါးကြင်းကြော်
လူသူလက်နက် ကို စုဆောင်းရင်း.
အေးချမ်းရေး လမ်းစဉ်နဲ့ 
အကောင်းဆုံးတွေ ကို မျှော်လင့်
အဆိုးဆုံး အထိ ရင်ဆိုင်
စစ်တပ်က လက် တဖြေးဖြေးယဉ်.
ခလေး။ လူအို။ ဘုန်းကြီး။ မယ်သီလ။ မိန်းမ။ ယောက်ျား.
ဗိုက်ကြီးသည်များ မကျန်။ ရှိသမျှမြေလှန်နေခိုက်။
ခန္တီစ..သည်းခံခြင်း ပါရမီ ပိုက်။
ဒုတ်ဆိုရင်..ဒုတ်၊ ဒါး ဆိုရင်ဒါး။
ကွဲကွဲ ပြားပြား။ စိတ်မှာ ပိုင်းခြား။
ရွံ့ ရွံ့ ချွန်ချွန် တိုက်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပြီ။
လူစွမ်းကောင်း ကို မတောင့်တနဲ့ 
မင်း ဟာ..မင်းဘ၀ရဲ့ ဖန်တီးရှင်
မင်း ဟာ..အနာဂတ်ရဲ့ စွမ်းအားရှင်
လူမသိ သူမသိ၊ အညတြ၏ အာဇာနည်။
ကိုယ့် ရာဇ၀င်ကိုယ် ရေးသည်.။
ပြန်ပြောင်း အသုဘ ကသိုင်းရှု
မသဒ္ဓါ ( ၂။၇။၂၀၀၈) ကိုအောင်ဝေးရေ..ကျမလည်း ရန်ကို..ပြတ်ပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:34 AM0comments
အစဉ်အလာ…ယဉ်ကျေး တဲ့ ဒို့ဗမာ .
ဗုဒ္ဓရောင်ဝါ…ရွန်းပ တဲ့ ဒို့ဗမာ .
ကူညီလိုတာ..ထာဝရ ဒို့ဗမာ .
ဖေါ်ရွေ ချစ်ခင်.ရင်းနှီးတတ် ဒို့ဗမာ .
အာဏာရှင်..စေရာ…ခေါင်းမငုံ မဲ့ သွေးတွေ
အာဇာနည်ဆိုတာ. ခေတ်သမိုင်းတို့ မှတ်တိုင်..
ညီညာပါစေ. ။ ခေါင်းငုံလို့ ဒို့ မခံ.
စစ်ကျွန်အောက်မှာ..ဒို့ တသက်တော့ မနေ.
ကြောက်မရွံ့နောက်မဆုတ်..အသက်ဘဲသေသေ..
မျိုးဆက်သစ်သို့ပေးရမဲ့ဒီအမွေ..
မီးဒုတ်.. မီးဒုတ်..ရှို့ မဲ့ဗမာ..
ဆုတ် ရွံ.့.နောက်မတွန့့်..ကြောက်သွေးတစက်မပါ./ ကြောက်မွေး တို့ မပါ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:47 PM0comments
ရှေ့ မှာ ပန်းတိုင် ရှိသည်။
ဘယ်ညာညီညီ..လှမ်းတက်စို့ရှေ့ ပန်းတိုင်ဆီ
ဒီမို ကရေစီ။ ဒီမို ကရေစီ။
လူ့ အခွင့် အရေးတွေ ရရမည်။
(လာ လာလေ..ဆက် လျှောက်ကြမည်။
လာ လာလေ..တွဲလက် ယှက်ညီညီ။
ဒီ အရေးတော်ပုံ.. ဒီ အရေးတော်ပုံ.. ဒီ အရေးတော်ပုံ..အောင်ရမည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:07 PM0comments
ဘလော့ဂ်ဂါမောင်နှမတွေအကြား ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ စနောက်ကြရင်း "မြို့စားကြီးနေဘုန်းလတ်" လို့ နာမည်တွင်ခဲ့ တဲ့သူ။ မနှစ်က ဒီလိုနေ့မှာပဲ "လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်" ဘလော့ဂ်လေးကို သူကိုယ်တိုင် အသက်သွင်းခဲ့တယ်။
ဒီနေ့ တော့ တစ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်သွားပြီပေါ့။
မှတ်မှတ်ရရ သူ့ ဘလော့ဂ်မှာ ပထမဆုံးတင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်နာမည်ကလည်း "လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်" တဲ့။
လက်တွေ့ဘဝမှာ သူလွတ်ကျခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ၊ ဒါမှမဟုတ် အနုပညာသမားဆိုတဲ့ အမည်နာမတွေအတွက် သူ့ ဘလော့ဂ်ဟာ သစ္စာရှိတဲ့ လူယုံ၊ အစွမ်းထက်တဲ့ လက်နက်၊ အရိပ်ကောင်းတဲ့ ညောင်သစ်ပင်လို အသုံး တော်ခံခဲ့တယ်။ ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်အတွင်းမှာ သူ့ မြို့တော်က စာကောင်းစာသန့် ၁၂၂ ပုဒ် မွေးထုတ် ပေးခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီစာတွေကြောင့် ဖတ်သူတွေအတွက် သုတပန်းတွေ လန်းလာခဲ့တယ် ၊ ရသလမ်းတွေ ဆန်းလာ ခဲ့တယ် ၊ ပညာမီးတွေ လင်းပလာခဲ့တယ် ။
ဘလော့ဂ်ဂါတွေ အတွက် ပထမဆုံးဆိုတဲ့ စကားလုံးတော်တော်များများမှာ သူနဲ့ လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်လည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ်။
ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေကို ပထမဆုံး ပုံနှိပ်မယ့်စာအုပ်အတွက် တက်တက်ကြွကြွနဲ့ သူ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ စာအုပ်ကိစ္စ ဆွေးနွေးပွဲတိုင်းကို မပျက်မကွက်တက်ရောက်ခဲ့သူဟာလည်း သူ တစ်ဦးတည်း ရှိခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး
မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါရပ်ဝန်းမှာ ဓလေ့ထုံးတမ်းတစ်ခုရှိတာက ဘလော့ဂ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ် ဘလော့ဂ်ဂါ တစ် ယောက်ရဲ့ အထိမ်းအမှတ်နေ့တွေမှာ အထူးရေးသားတဲ့ ပို့စ်တွေ တင်တတ်ကြတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေက လာနှုတ်ဆက်ကြတယ်၊ Comment တွေ ချီးမြှင့်ကြတယ်။
ခုလိုအချိန်မှာ သူသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးသားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သူ့ဘလော့ဂ်အတွက် အထိမ်း အမှတ်ပို့စ်တင်မယ့် အစီအစဉ်ရှိမယ်ဆိုတာ အသေအချာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ … ဘယ်မှာလဲ ။ သူရေးမယ့် ပို့စ်မှာ Comment ရေးဖို့ ဘလောဂါ့ရပ်ဝန်းက သူငယ်ချင်းတွေ သူ့ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်တကြီး စောင့် နေကြတယ်။ " မြို့စားကြီး " လို့ စနောက်ကြဖို့ စောင့်နေကြတယ် …
ဘလော့ဂ်ဂါတွေကို ချစ်ကြည်စေချင်တဲ့ သူ့အတွက်၊ လူငယ်တွေကိုကောင်းစေချင်တဲ့ သူ့ အတွက်၊ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ သူ့ အတွက် ဘေးဒုက္ခဆိုတာ မြူတစ်မှုန်စာတောင် ကျရောက်မလာစေဖို့ ဘလောဂါ့ရပ်ဝန်းမှ ညီအကိုမောင်နှမအားလုံးက ဒီအမှတ်တရ ပို့စ်လေးနဲ့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:40 PM0comments
လေးစားချစ်ခင်..ဗိုလ်ချုပ်ဖခင်၏ (၉၃) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ မင်္ဂလာ.
ဖန်တီးရှင်..မောင်လေးကိုမျိုး အား ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။ စွမ်းစွမ်းတမံ အနုပညာစွမ်းဖြင့် ပြည်ကျိုးထမ်းရွက်နိူင်ပါစေ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:50 PM0comments
မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ ချမှဘဲ..သူတို့ ခွေးကျ ကျသေ
မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ တိုက်မယ် ဟာ့
မြန်မာပြည်က စစ်သူရဲ မကောင်းများ
ခုတော့ အနာပေါ် ဒုတ်တည့်တည့်ကျ
" အင့်" ကနဲ ခွေးကျကျသွားသည်။
ဟောလီဝုဒ်ရဲ့ မီဒီယာ လက်နက်သည်
ဇင်ရော်မောင်မောင်နဲ့ကာဖို့ မမှီ..။
တံတွေး မတိတ် တဲ့ ကျော်ဆန်း
ကျောင်းမှန်း ကန်မှန်း သိနေ..
DVD တွေ လိုက်ဖမ်း။
လူတွေ ကြား၊ လိုက်ထောက်လှမ်း
အင်တာနက်စပိ တွေ လိပ်ခြေလှမ်း လှမ်း
ခင်ဗျားတို့ပိတ်လည်း..ကျမတို့ မကြောက်။
ဗူးတရာသာ ပိတ်. မတိတ်မဲ့ ပါးစပ်..
ဖုံးဖိလေ..အပုပ် ပိုပို ပွမယ် မှတ်
ရန်ဘို စစ်သားကို ဘယ်လို သတ်။
ခလေးငယ်များ.ကစား၊ ဒက်..ဒက်..ရမ်ဘို ရဲ့သေနတ်။
အိမ်ရှင်မများ ဈေးသွား၊ ရမ်ဘို ကားစမြုံ့ ပြန်တတ်။
ဒီမှာ..ရော့ယူ။ ရမ်ဘို့DVD တစ်ချပ်.
စစ်သား ခေါင်းဘယ်လို ပြတ်တာ။
သူများတွေကျ မကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့ 
ဒို့ ကျ မတားနဲ့ ။
ဟင့်..ကြည့်မှာဘဲ ၊ ကြည့်မှာဘဲ၊
များတို့ ကို .ရမ်ဘို ဘာတွေဆော်ထား..
များတို့ ကို ..ရမ်ဘို ဘာတွေ ကလော်ထား..
ဟုတ်တာဆို.. နာလို ခံခက်..
ရမ်ဘိုက လက်ခမောင်းခတ် စိမ်ခေါ်နေလည်း.
သတ္တိရှိရှိ.၀ါရှင်တန်ကို လာပါဆို နေလည်း..
ကိုယ့်လူသာ ကိုယ် နှိပ်ကွပ်ရဲ
ရဲတဲ့ သူတွေနဲ့ ကျ..ခွေးလို အမြီးကုပ်.
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:10 AM0comments
အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်၊ အဆိုးဆုံးအတွက် အဆင်သင့်။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အချက်ပေး တပ်လှန့် 
အနီးကပ်ဆုံးရန်သူ ကို တော်လှန်ကြစို့ 
လှို့ ဝှက် မိန့် ခွန်းစကားတချက်..
မရပ်မလှင့်၊ ရှေ့ တိုးသာ ဇွဲနဲ့ နှစ်
ဘုရင့်နောင် ရဲ့ နောင်ရိုး..
စစ်ဖောင် ဆိုတာ ဖျက်ရိုး..
ပျော့နေလေ..ဒို့ တွေ ရှုံးလေလေဘဲ
ဒင်းတို့ရက်စက်တာများပြီ.
ခု ဒို့ နန်းတော်မှာ..တက်နေတယ်.
ဗမာကောင်း ရဲ့ ဇာတိမာန်..
ဒို့ တွေက ရန်သူကို ဘယ်ဒင်းလည်းသိ..
ရန်သူက ဒို့ ကို..ဘယ်သူမြွေ ဆိုတာမသိ..
စစ်တပ် ရဲ့ ကိုယ်ပျောက်ရန်သူ..
မင်းနဲ့ဘေးတိုက်သွားနေတဲ့လူ..
ဗမာဆိုတာ..သတ္တိနဲ့ဗျတ္တိ..
သုံည (ဇီးရိုး) အချိန်တဲ့၊ နောက်ဆုံးနာရီ
အပြင်းဆုံးမုန်တိုင်း။ သမိုင်းတို့ ရေးတော့မည်.
မပါ မရှိစေ နဲ့ ၊
အားလုံး ၀ိုင်းကြ ညီညီ။
လှို့ ဝှက် မိန့် ခွန်းရဲ့ ပဟေဠိ
အဓိပ္ပါယ် သိကြ၊ နားလည်စေ
ပြန်လမ်းမဲ့အသေခံတိုက်ပွဲတစ်ခုပေ။
နောက်ဆန် တငင့်ငင့်၊ နားစွင့်ကြည့်မနေနဲ့ 
ဇွဲ နဲ့သာရှေ့ ဆက် ရဲရဲချီ.
နောက်ဆုံးလူ သွေးတစ်စက် ကျန်ကျန်
မနားတမ်း ဆက်တိုက်ကြရန် ဖြစ်သည်။
ကဲ လာကြ ...ပြိုင်တူချီ..
အနီးကပ်ဆုံးရန်သူ ကို တော်လှန်ကြမည်။
မသဒ္ဓါ ( ၂။၃။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:18 PM0comments
အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ရှင်မလား… အဓိပ္ပါယ်နဲ့ သေမလား…
သေရင်တနေ့ ။ မွေးရင်တနေ့ 
ကြံစုတ်ချောင်း၊ အရင်းထိ မရောက်ခင်
မျက်တောင်တမှိတ်။ လျှပ် တရိပ်တခဏ..
မြို့ ရိုးကြီးဘဲ ဆောက်ဆောက်
ငလျှင် တချက် နဲ့ပြို..
မင်း ကမှ အာဂလူ..
မိခင်ကောင်းတို့ ၏ ဂုဏ်ကျက်သရေ။
ယောက်ျားဆို ဒါးသွေး… လက်မနှေးနဲ့ ။
အဓိပ္ပါယ်မဲ့အရှင်မခံ…
အဓိပ္ပါယ်နဲ့ သာ သေရန်
သစ္စာ အသက်နှံတာမို့ 
သားငယ်တို့ ၊ ဥကျင်း မှာဖောက်..
ခွပ်ဖို့ လေဆန် ကိုပျံ
တိုက်ပွဲသစ်သို့ပြန်ခေါ်ရန်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:48 PM0comments
ပျင်းလို့ တောင် မနားရတဲ့ပျဉ်းမနား.
ရန်ကုန်ဆို တာ..ရွှေမြို့ တော်ကြီး..
(၁၇၅၅) ခုက ပေးခဲ့တဲ့..
ရန်တွေ ကုန်ခ တဲ့ ရန်ကုန်
နှစ်ပေါင်း (၂၅၀၀) က တည်အပ်
ရွှေတောင် မားမားရပ်တဲ့ ရန်ကုန်။
မင်္ဂလာစုံတဲ့အကျွန်တို့ ရွှေမြို့တော်
နန်းတော်သစ် တည် မင်းတရား
တေဇ က လာဘ်ပေး ပရောဂျက်ကို သိမ်း
မြို့့ပြတည်ရာ အဂါင်္မညီတဲ့ တော..
လွယ်ပါတယ်။ ပေး လက်ဖက်ရည်ဘိုး ဘဲ..
ပြူတင်းက ရေယိုတာမဟုတ်ဘူး အပြစ်.
တရားဥပဒေက မှ မစစ်
တနေ့မင်းကိုယ်ကြီး လည်ပင်းကြိုးဆွဲ
“ ပင်ဂွင်း မွေးအောင်” လို့ ပေးတဲ့။
အူတူတူနဲ့ ဗေဒင် ယတြာ..
ဖူံထူထူ..နေပူပူ နဲ့ ကျပ်ပြေး.
သူငယ်တန်းကလေး ကမှ ရှင့်ထက်လည်။
မသဒ္ဓါ (၂။၃။၂၀၀၈) http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1047&Itemid=1...ဖတ်၍ ခံစားပါသညိ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:32 AM0comments
ဘယ်သူ့ သားလေးပါလိမ့်? တကတည်း တော်မှ တော်
နိုင်ငံတော်စရိတ်နဲ့ ၊ ထောင်ထဲထည့်ထား
မိဘအိမ်မှာ နေ..မိဘက ပြုစု
လာပင့်ခေါ်သွားလို့ သာ ထောင်ထဲရောက်
အကျဉ်းသားတွေ ဆေးကု ဖို့ ငွေ
သင့် အိပ်စိုက်တွေ မဟုတ်
ပြည်သူတွေ ဒီအတွက် အခွန်ပေးထားတာ ဦးသန်းရွှေ။
သင့်လူတွေ ခိုးလို့ ကုန်တာ..သင့်တာဝန်.
ပီညဲရိုး လာတုန်းပြတဲ့ အိုးသစ်ကြီးများ
မဖတ်ချင် ဆုတ်ပစ်လို့ ရတာမဟုတ်
ခလေးတွေ..နေမကောင်းပါဘူး ဆိုမှ ပိုတိုက်ပိတ်။
ဘီလူးဆိုင်းနဲ့ က ပတ်ကြမ်းတိုက်
ဒါ မင်းနံမည်အပုပ်နံ့ နဲ့ တွင်
သန်း သန်း တဲ့ သန်း သန်း
ဆိုးပါတယ်ဆိုတဲ့ ဘင်လာဒင်တောင် ငိုသွားမယ်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:48 AM0comments
အမှန် တကယ် အရေးကြီးတာက ဘယ်သူ..?
မိုးအားကိုးစိုက်မဲ့ မိုးကောင်း လယ်စပါး
ပြည့်ဝမ်းကျီတိုက်တဲ့ လယ်တွင်း ကိုးခရိုင်
ပုဂံရွှေပြည် ..စပါးတောင်လို မောက်။
လူ့ ဥာဏ်စွမ်း ဖြိုးမောက်က
ဂျူး လူမျိုးတို့ ရဲ့ စွမ်းအင်။
နေ့ တိုင်း ရေလိုတယ်။
မင်းကိုလေ..တနေ့ ထဲ အစာအ၀ကြွေး
၀နေပြီဘဲ..နောက် ဆယ်ရက်မစားနဲ့ 
လာတလှည့် မလာတလှည့်နဲ့ ဆည်ရေ
စပါးနှံ ဖြစ်နေချိန် ရေမကျ။
သီးကင်း တွေ ကြွေကျ။
ရေပေး ရေလာ၊ အချိန်မှန်မှ..
တောင်သူကြီးမင်း..ခွေးသားနို့ စို့ တွဲလွဲ
ဒီပုလ္လင်ပေါ်ထိုင်ချင်. ဒီပုလ္လင်နဲ့ တန်အောင်လုပ်
လယ်သမားတွေ ၀မ်းစာပြုတ်အောင်တော့လာမလုပ်နဲ့ 
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:16 AM0comments
မောင်းဆို တာ ဆန်ထောင်းဖို့ ပေမဲ့
စစ်တပ်ဆိုတာ. တိုင်းပြည်ကို.နယ်ချဲ့ရန်က ကာကွယ်ဖို့ ပေမဲ့
ဒါးမိုး ပြည်ဖျက်စေတဲ့ လူဆိုးတွေရဲ့ ကြေးစားစစ်တပ်
တလွဲဆံပင်ကောင်း၊ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူအပေါင်း
အနုပညာကို မြတ်နိုးလိုက်ပါတဲ့ ခလေး..
ဇာတ်ထဲက ပုဏ္ဍားတွေရဲ့ ဂုံးချော ကြားလေသွေး..
အမှန်က..အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရင်းရှာ ..
သူ့ အင်တာနက်ဆိုင် တွေပိတ်ချင်တာပါ။
ဗမာမိန်းမတို့ ရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်မာန်ဟုန်
ပျောက်ကုန်ပြီ မထင်နဲ့ 
ဘယ်တော့ မှအညွန့် မကျိုးမဲ့
ဒို့ ဘုန်းကြီးတွေ. ဒို့ လင်တွေ.
ဒို့ ခလေးတွေရဲ့ အသက်..
မင်း ဆောရီးဆို ရုံနဲ့ မကြေပျက်
ပုခက်လွှဲတဲ့လက်.ကြက်သွန်လှီးမဲ့လက်
ဗြုံးကနဲ ထလောင်တဲ့ အခါမှ..
မင်း ခေါင်းဘဲ ဒီမှာ ထားခဲ့လိုက် ကိုယ်လူ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:03 AM0comments
အမှန်တရား အတွက် တိုက်မဲ့စစ်သည်။
ဥဒေါင်းသွေး တို့ရဲ နီ နီ
မနိုင်မချင်း မဆုတ်မရွံ့ .. ဇွဲ နဲ့ အရင်းတည်.
ထင်ရှား သမိုင်း တို့ရေး ခဲ့ ပြီ။
ဒို့ ကျောင်းသားတို့ သတ္တိဘာမထီ
အနာဂတ်တို့ အတွက်၊ အကျိုးမျော်ရည်
မလျှော့သော.လုံ့့လ၊ သတ္တိအရင်းတည်.
အမိမြန်ပြေ ကောင်း စားဖို့ ရည်
ဘာမဆို..စွန့် လွတ် နောက်မဆုတ်ချင်
ရဲဝံ့ ခဲ့ သော၊ အာဇာနည်.။
ရောင်နီ လင်း တော့မည်..
အမှောင်ကွယ် အလင်းတန်းတို့ ကောင်းကင်
မိုးသောက်ခဲ့ ပြီ ဗမာပြည်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:38 AM0comments
ဂဠုန်မင်းတို့ ရဲ့ တောင်ပံခတ်သံ
ခေါ်ချင် သလိုသာ ခေါ်ပါ။
ဆီနဲ့ ရေချိုး. ဆေးရိုးနဲ့ မီးလှုံ
ကျုပ် အဘလက်ထက်က လှုထား
ကောင်းလိုက်တဲ့မိုး .သန့် စင်တဲ့မျိုး
ဖွံ့ လိုက်တဲ့ ပျိူး..စိမ်းနေတဲ့ ကောက်ပင်
ပြည့်နှံတဲ့ စပါး. လုံးမို့ အိအိ ဆန်သား
ကောက်သင်း စပါးနှံ လယ်ထဲမှာချန်
စပါးနှံတွေ ကျစ်ထုံးဖွဲ့ 
စပါးကုံးသွဲ့သစ်ပင်မှာချိတ်ရာ။
ဌက်ငယ်များ အတွက် အစာ
ရွာ ဘုရားပွဲများ ရက်မပြတ်။
လယ်မြေကောင်းများ.. ခြောက်သွေ့ ဖုန်းဆိုးဖြစ်
မိုးလေမမှန်ခြင်းအကြောင်းက အုပ်စိုးသူက မင်းညစ်
ဂရံ လယ်မြေများလည်း စစ်တပ်သိမ်း..၀န်ထမ်းအိမ်ယာဖြစ်
ဗေဒင်အကြောင်း. မဖြစ်နိုင်တဲ့သီးနှံများ လာစိုက်ခိုင်းနေကြောင်း
ကာလသားအရွယ်မရောက် ခလေးလေးများ..စစ်တပ်က ချောဆွဲကြနှင့်
ယုတ်စွ အဆုံး..လှည်းယဉ်ကြော့ဆင်ဖို့ မွေးထား
ဆုံလည်နွား နဲ့ မီးထွန်းမဲ့စီမံကိန်း
သူများသြဇာမခံချင်..ကျုပ်တို့စစ်သားမလုပ်။
အခုမှာ နေပူစပ်ခါး ။ နွားနဲ့ ရုန်းထား
မိစ္ဆာဒိဌိ များကို ရရာလက်နက်နဲ့ တော်လှန်.
ဟေ့..ဂဠုန်မင်းတို့ ရဲ့ အားမာန်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:23 AM0comments
သူယုတ်မာနဲ့ သူတော်ကောင်း (ပုလိပ်ဆိုးနဲ့ ရိုးသား လေ...
လေးစားချစ်ခင်..ဗိုလ်ချုပ်ဖခင်၏ (၉၃) နှစ်မြောက်မွေး...